” အရေးပျေါကွညောပွီ ”( Wuhan Virus)
” အရေးပျေါကွညောပွီ ”( Wuhan Virus) အရေးပေါ်ကြေညာပြီ( Wuhan Virus) ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နာရီအတွင်း တရုတ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ( ဝူဟန် ခိုယိုနာ Virusရောဂါ) အားအဆင့် 1မှ အဆင့်2 အဖြစ်သို့ တိုးမြှင့်ကြေညာလိုက်ပါပြီ . အသက် 10နှစ်အရွယ် ခလေးငယ်မှာ ပုံမှန် […]
မိန်းခလေးတွေများနော်…အရှက်အကြောက်တရားလုံးလုံးမှကို မရှိကြတော့ပါလား(ရုပ်သံ) မိန်းခလေးတွေများနော်…အရှက်အကြောက်တရားတောင်မှ မရှိကြတော့ပါလား..? ပုံကြည့်ရတာလဲ ဆေးကွဲနေတဲ့ရုပ်တွေထွက်နေတာ..။ ကိုယ်ကလဲ မဟုတ်တာလုပ်သေး ။ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို မရှက်မကြောက် ဆဲဆိုနေလိုက်ပုံများ ကြားရတာ နားဝမှာ မချမ်းသာလှဖူး..။ ကားရှိတယ်ဆိုပီး တက်နေလိုက်တဲ့ မာန်ကလဲ …. ပြောကို မပြောချင်တော့ဖူး..။ ကဲနောက်လူတွေလဲ သူတို့ကိုကြည့်ပီး အသိတရားလေးတော့ ရကောင်းပါရဲ့နော်..။ […]
မိန်းကလေးငယ်များကို တရားဝင်မုဒိမ်းကျင့်ခွင့်ပေးသည့်ဥပဒေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့လို့ အကြီးအကျယ်ဆန္ဒပြခံနေရတဲ့ ဥရောပနိုင်ငံ
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင်သာမက မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေ နဲ့ အဓမ္မကျင့်သတ်ဖြတ်မှုတွေဟာ ပိုမိုများပြားလာတာကို အားလုံး သတိထားမိကြမှာပါ။ အခုလို မိန်းကလေးတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေ အနိုင်ကျင့် သတ်ဖြတ်ခံနေရမှုတွေ မြင့်တက်နေ…၊ ချိန်မှာ တူရကီ နိုင်ငံကတော့ မိန်းကလေးတွေကို အတင်းအဓမ္မကျင့်ပြီး လက်ထပ်မယ်ဆိုရင် တရားဥပဒေအရ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ့် ဥပဒေတစ်ရပ်ကို မကြာခင်မှာပြဌာန်းတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ […]
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အကုသိုလ်ကံ လောကမှာ ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ တွေ့ကြုံဆုံကွဲ ဖြစ်ကြရတာ ဓမ္မတာပါ… ဘာထူးဆန်းလို့လဲလို့ မေးချင်စရာ… ဟုတ်တယ်.. မထူးဆန်းဘူး…ထူးဆန်းတာတာကတော့…အဲဒီမိန်းမတစ်ယောက်ဟာ…ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာမရှိ…တန်ဖိုးမထား… ကိုယ့်အပြင် အခြား အခြားသော မိန်းမတကာ မိန်းမတွေကို လစ်ရင်တွယ်…ချောင်ရင်နှိုက်…ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းကို ရထားပြီဆိုရင်တော့…အဲဒါ….ထူးဆန်းနေပြီ… ကျွန်မငယ်ရွယ်စဉ် စိတ်ဓာတ်မရင့်ကျက်ခင်ကာလတွေ… တရားတွေ ကို […]
ကြေးဇူးကနျး တဲ့ ပွိုငျပှဲ ဝငျဟောငျးတဈယောကျ ကို ဒဲ့ပွောလိုကျ တဲ့ တငျဇာမျော
ကြေးဇူးကနျး တဲ့ ပွိုငျပှဲ ဝငျဟောငျးတဈယောကျ ကို ဒဲ့ပွောလိုကျ တဲ့ တငျဇာမျော နာ မညျကွီးအဆိုတျောတဈဦးဖွဈတဲ့ တငျဇာမျောကိုတော့ အသံပါဝါအားကောငျးတဲ့ အဆိုတျောတဈဦးအနနေဲ့ရော၊ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နာမညျကွီး သီခငျြးအဆိုပွိုငျပှဲတဈခုရဲ့ ဒိုငျလူကွီးအဖှဲ့ဝငျတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ..။ နာမညျကွီးအဆိုတျောတဈယောကျဖွဈနပေမေယျ့ မြိုးဆကျသဈ ဂီတအနုပညာရှငျ ကွယျပှငျ့လေးတှကေိုလညျး လကျတှဲချေါဆောငျပေးတတျတဲ့သူတဈဦးပဲဖွဈပါတယျ..။ သူမရဲ့ သီခငျြးတှဖွေဈတဲ့ “ဧညျ့သညျ” […]
နဝမတနျးအောငျမွငျသူမြားကို နစေ့ားလပေး မူလတနျးပွဆရာ၊ဆရာမမြားလုပျရနျ ချေါယူ…(တခွားသူမြားသိအောငျ မြှဝပေေးပါအုံး)
နဝမတနျးအောငျမွငျသူမြားကို နစေ့ားလပေး မူလတနျးပွဆရာ၊ဆရာမမြားလုပျရနျ ချေါယူ…(တခွားသူမြားသိအောငျ မြှဝပေေးပါအုံး) ရှမျးပွညျနယျ(မွောကျ ပိုငျး) မိုငျးဆတျခရိုငျ မိုငျးတုံမွို့ နယျရှိအခွခေံပညာကြောငျးမြား တှငျ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပျခကျြ ကွောငျ့ အနိမျ့ဆုံးနဝမတနျး အောငျမွငျထားသူမြားကို နစေ့ား လပေးမူလတနျးပွဆရာ၊ ဆရာမ အဖွဈ ချေါယူခနျ့ထားရနျ ပညာ ရေးဝနျကွီးဌာနက ခှငျ့ပွုခဲ့ပါတယျ။ ဆရာ၊ […]
အမေစု ကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့ မုန့်ဖိုး ၃ သိန်းကျော် ရသွားတဲ့ သားအမိ နှစ်ယောက် ရဲ့ ဖြစ်ရပ်…
အမေစု ကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့ မုန့်ဖိုး ၃ သိန်းကျော် ရသွားတဲ့ သားအမိ နှစ်ယောက် ရဲ့ ဖြစ်ရပ်… မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တော့တမူးမြို့ကို ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရင်း သူ့ကို လေယာဉ်ကွင်းနားအထိ လိုက်နှုတ်ဆက်တဲ့ သားအမိ နှစ်ယောက်ကို ငွေကျပ်သုံးသိန်း ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရ့ါတယ်..။ […]
ရမွှေးတွေအကုန်မရောင်းဘဲ အိမ်ပြန်ရင် ဖခင်ကရိုက်နှက်နှိပ်စက်လို့ လမ်းဘေးမှာသာ အိပ်စက်နေခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ်အဖြစ်
ရမွှေးတွေအကုန်မရောင်းဘဲ အိမ်ပြန်ရင် ဖခင်ကရိုက်နှက်နှိပ်စက်လို့ လမ်းဘေးမှာသာ အိပ်စက်နေခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ်အဖြစ် ကလေးငယ်တွေတိုင်းကတော့ ကျောင်းကနေအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာရင် ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးရပြီး ပျော်ချင် ၊ ဆော့ကစားချင်ကြတာ သဘာဝပါပဲလေ ။ သို့ပေမဲ့လည်း တစ်ချို့ကလေးငယ်တွေကတော့ ဆော့ကစားဖို့မပြောနဲ့ အခြားသောကလေးငယ်တွေလိုစာသင်ခွင့်မရဘဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ငွေရှာနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေလည်း အတော်များများရှိပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြမဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံက ကလေးငယ်ဟာလည်း […]
အမျိုးသားဥပဒေနဲ့ ငြိလို့ ဆက်မလွှင့်တော့ပဲ ရပ်သွားဖို့ရှိတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားဗိုလ်ကြီးကား ကိုရီးယားရုပ်ရှင်လောကကို စံချိန်ချိုးပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးက စောင့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့ Crush Landing On You ဇာတ်ကားကိုတော့ ပရိသတ်တွေတော်တော်များများကြည့်ရှုအားပေးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားဗိုလ်ကြီး ဇာတ်ကားဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အနုပညာရှင်တွေသာမက ပရိသတ်တွေပါ တခဲနက်စွဲလန်းအားပေးကြပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ဗိုလ်ကြီးမှဗိုလ်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ […]